Ka bixista heshiiska kirada guriga - Tenants Victoria
Haddii aad leedahay waqti go’an kiro (oo badanaa loo yaqaan heshiis ijaareed), oo aad rabto inaad ka baxdo ka hor dhammaadka muddada go’an, waad awoodi kartaa inaad kusoo afjarto heshiis ijaareedkaaga mid ka mid ah dariiqooyinka soo socda. Waxaad u baahan tahay inaad taxaddar muujiso maxaa yeelay qaar ka mid ah hababka lagu dhammeeyo heshiiska kirada waxaa ku jiri kara kharashyo.
Marka uu milkiile guri ku xadgudbo
[headline]resources[/headline] Breaking a lease fact sheet [pdf 100KB][/column]
Heshiis kasta oo kiro waxaa lagu dhammeyn karaa ‘heshiis wada jir ah’ oo dhexmara milkiilaha guriga iyo kireyste/ijaarte. Waxaan si xoogan kuugula talineynaa inaad heshiiska ku hesho qoraal, oo ay ku xusan tahay inaadan masuul ka noqon doonin wixii kharash dheeri ah ama magdhaw jabinta heshiiska. Adiga iyo milkiilaha guriga ama wakaalo waa inaad saxeexdaan heshiiska. Xaqiiji inaad haysato nuqul ka mid ah.
Marka uu milkiilaha gurigu ku xadgudbo
Haddii milkiilaha gurigu jebiyo mid ka mid ah ‘waajibaadkooda’ sida hoos timaada sharciga Xeerka Kiradda Deganaanshaha (Residential Tenancies Act) 1997 waxaa laga yaabaa inaad awoodo inaad xili hore soo afjarto kirada. Tani waxay qusaysaa haddii milkiilaha gurigu: [list type=square_list]
aanu hubin in hantida ay macquul ahaan nadiif ahayd oo banaan tahay markii lagaa rabay inaad u soo guurto
aanu hubin inaad leedahay ‘raaxo deggan’ hantida
aanu ku ilaalin hantida dayactir fiican
aanu kusiin qufullo lagu ilaaliyo albaabada dibedda iyo daaqadaha, ama aanu kusiin furaha markay beddelaan qufulka
aanu beddelin qalabka biyaha qaladka ah aaladda A-lagu qiimeeyo
Si loo dhammeeyo kirada kahor dhammaadka mudada go’an marka uu jabiyo mid kamid ah waajibaadka kor ku xusan milkiilaha gurigu, waxaa jira dhowr talaabo oo aad u baahan tahay inaad ku dhaqaaqdo.
Tallaabada ugu horreysa ayaa ah inaad u dirto milkiilaha guriga Ogaysiinta Waajibaadka Jabinta si aad ugu wargaliso inay tahay inay xalliyaan dhibaatada (iyo haddii ay munaasib tahay, waxay kugu siinayaan magdhaw) 14 maalmood gudahood)
Haddii milkiile guri ku guuldareysato inay sidan sameeyaan, waxaad ka dalban kartaa Golaha Maamulka Xeer ilaalinta iyo bulshadda Victorian (Victorian Civil and Administrative Tribunal) ee loogu talagalay waafaqsanaanta Amarka.
Haddii milkiilaha gurigu u hogaansami waayo Amarka Adeecida, waxaad u diri kartaa Kutalagalka Ogaysiinta Faaruqinta 14 maalmood.
Waxa kale oo aad u diri kartaa milkiilehaaga guriga 14-maalin ogeysiin ah oo ah Kutalogalka Faaruqinta haddii aad u dirtay Ogaysiinta Jebinta Waajibaadka laba jeer kahor jabinta, milkiilahaaga guriguna uu waajibaadkaa jabiyay mar saddexaad .
Halkii jabinta heshiis ijaareedkaaga, way fududaan kartaa inaad wareejiso ama ‘meelayso’ heshiiskaaga kiro kirayste kale. Si kastaba ha noqotee tani had iyo jeer maaha ikhtiyaarka ugu fudud maadaama aad u baahan tahay inaad hesho oggolaanshaha milkiilaha guriga, cusboonaysiinta heshiiska kirada oo aad u diyaarsato wareejinta damaanadda sidaa daraadeed uma xisaabsanaanasid kireyste kale. Sidoo kale, milkiilaha gurigu waxay kugu dallaci karaan qiimaha macquulka ah ee diyaarinta meelaynta qoraal ahaan laakiin kuma dallici karaan abuurista kireyste heshiis cusub oo ah kireyste kale.
Haddii wax aan la fileyn ay dhacaan ayna kuu horseedi doonto dhibaato aad u daran inaad ku sii jirto hantida ilaa dhammaadka mudada go’an, waxaad ka dalban kartaa Golaha Maamulka Xeer ilaalinta iyo bulshadda Victorian (Victorian Civil and Administrative Tribunal) inay yareeyaan muddada go’an oo kuu oggolaaneyso inaad joojiso muddadaada go’an oo aad u oggolaato inaad ku soo gabagabeyso kiradaada. Waa inaad weydiisataa Maxkamada inay dhageysato dacwadaada sida ugu dhaqsaha badan. Waa inaad sii waddo bixinta kiro/ijaar sida caadiga ah, illaa dhageysi uu dhacayo. Haddii aad qorsheynaysid inaad dalbato dhibaato, waa inaad sidaas sameysaa ka hor intaadan guurin.
Si aad sheegato dhibtaada, waa inaad ka cadeysaa Maxkamada in: [list type=square_list]
inay jireen isbeddelo lama filaan ah oo ku yimid duruufahaaga (tusaale ahaan shaqadaadii waad lumisay) waxaad la kulmi doontaa dhibaato aad u daran haddii kiradu ay sii socoto; iyo
dhibaatada aad la kulmi doonto haddii kiradu aanay dhammaanin wuxuu ka weynaan doonaa dhibaatada milkiilaha guriga haddii kiradu ay dhammaato
Waxaa laga yaabaa inaad wali u magdhawdo milkiilaha guriga hadaad jabiso heshiiskaaga dartiis dhibaato awgeed (arag Kharashaadka ).
Dhibaatada iyo rabshada qoyska
Haddii aad tahay ‘ qofka ilaaliya’ Amarka Farogalinta dhibaatada qoyska oo aad u baahan tahay inaad ka guurto hanti si aad u ilaaliso naftaada ama carruurtaada, waxaad ka dalban kartaa Maxkamada inay yareyso mudadaada go’an oo aad oggolaato kireysigaaga duruufaha adag.
Haddii lagaa saaray hanti kiraysan Amarka rabshada qoyska dartood waxaad sidoo kale xaq u leedahay inaad dalbato Maxkamada si loo yareeyo mudadaada go’an oo aad ku oggolaato inaad joojiso heshiiska kirada bilowga hore.
Hadaan mid ka mid ah dariiqooyinka kore ee jabinta heshiis ijaareed adiga kuu aheyn ikhtiyaar, waxaad ku dhammayn kartaa waqtigaaga go’an kirada goor hore adoo iska leh lahaanshaha hanti. Tan waxaa badanaa la sameeyaa iyada oo la siinayo milkiilaha gurigu ogeysiin ah in aad bannanayso hantida (sida Ogaysiinta Kutalogalka Faaruqinta) iyo inaad gacanta kagaliso furayaasha marka aad guurayso.
Jebinta heshiiska kirada darteed sabab la xiriirta dhibaato darteed ama haysashada ka tagitaanku waxa ay noqon kartaa mid kharash wadata. milkiilaha gurigu waxa uu sheegan karaa magdhaw wixii kharash ah oo macquul ah oo ay tahay inay ku bixiyaan sababta oo ah inaad jabisay heshiiska kiraysiga.
Kharashaadka kugu waajibi kara waxaa ka mid ah: [list type=square_list]
ujrada dib u siinta (badanaa hal ama laba toddobaad ‘kiro/ijaar). Tani waa inay ku salaysnaataa khidmadda ay wakaalo ku soo dallacday milkiilaha guriga sidaa daraadeed waa fikrad fiican in la codsado nuqul qaan-sheegasho ah
kharashyada xayeysiinta ee macquulka ah
kiro/ijaar ilaa kireystayaal cusub ay usoo guuraan ama ilaa dhammaadka waqtiga go’an (hadba kii dhaca marka hore)
Waxa milkiilaha guriga ama wakaalo laga yaabo inay kuu sheegi waayaan inaad bixinayso oo kaliya lacagta dib-u-bixinta iyo kharashyada xayeysiinta ee ku saleysan pro-rata. Tan micnaheedu waxaa weeye inaad kaliya daboosho ujradan muddada harsan ee heshiiska kirada oo milkiilaha gurigu aanu helin kiro/ijaar. Tusaale ahaan, haddii aad 7 bilood uga baxdid iyada oo 12 bilood oo kiro ah, waxaa jira kaliya 40% muddada go’an oo hartay sidaas darteed waa inaad kaliya bixisaa 40% qarashka dib u siinta iyo 40% qarashka xayeysiinta.
Haddii aad rabto inaad jebiso heshiiskaaga kirada, waa inaad siisaa inta ugu badan ee ogeysiin intii suurtagal ah qoraal ahaan (hayso nuqul waraaqdaada ah). Waa fikrad fiican inaad sheegto taariikhda saxda ah ee aad bixi doontid iyo inaad rabto milkiilaha guriga ama wakaalo si aad u hesho kireyste/ijaarte. milkiilaha gurigu ayaa la rajaynayaa inay qaado dhammaan talaabooyinka macquulka ah si loo helo kireyste/ijaarte sida ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan. Wixii intaa ka badan ee aad sameyn kartid si aad uga caawiso helitaanka kireyste/ijaarte (sida inaad haysato hanti oo diyaar u ah kormeerka, ama xayeysiinta hanti adigu aad adigu iska leedahay).
Waa inaad bixisaa oo kaliya kiro/ijaar ilaa maalinta aad ka baxdo. Marka kireystayaal soo galaan, ka dib waxaad siin kartaa milkiilaha guriga magdhaw wixii lumay ee kiro ah.
Waa inaad hubisaa in milkiilaha gurigu ama wakaalo ay qaadayaan tillaabooyin ay ku xirayaan hanti kadib markaad siiso ogaysiin aanad hubiso taariikhda kiraystaha cusub uusoo galayo. milkiilaha gurigu waxay leeyihiin waajibaad ah inay ilaashadaan khasaaradooda ugu yaraan, sidaa darteed haddii ay sameeyaan waxkastoo ay ku adkayn kareyso helitaanka kireyste/ijaarte (sida gelinta sare u qaadida kirada) ama haddii aanad ku dadaalin inaad hesho kirayste kale, waxaad ku doodi kartaa inaadan u baahnayn inaad siiso lacagta dhan magdhaw.
Hubi qaybta ‘Waxyaabaha La Siiyo’ ee wargeysyada waaween iyo Liisaska Kirada ee laga heli karo wakaalo. Haddii aad galaangal u leedahay internet ka, waxaad sidoo kale hubin kartaa websaytka wakaalada. Haddii hantida aan la xayeysiin ama lagu xayeysiiyay kiro/ijaarka sareeya, waxaad u haysataa tani caddeyn muujineysa in milkiilaha gurigu aanu isku dayin inay khasaarahooga ku ilaaliyaan halka ugu hooseysa.
Haddii aad u maleynaysid in kharashyada ay milkiilaha gurigu sheeganayaan inay yihiin kuwa aan macquul ahayn, ha oggolaan inaad bixiso. Milkiilaha gurigu markaa waa inuu sameeyaa sheegasho oo ka dhan ah dammaanaddaada ama u adeegsadaa Golaha Maamulka Xeer Ilaalinta iyo Bulshada Victoria si uu u helo magdhaw. milkiilaha gurigu waa inay ku siiso ogeysiin ku saabsan sheegashadooda waxaadna fursad uheli doontaa inaad ku soo bandhigto dhinaca sheekadaada Tribunal.
Ku wareejinta iyo sii kiraynta
Ku siinta milkiilaha guri ogeysiin jebinta waajibaadka
Difaacida magdhaw sheegasho ee milkiilaha guri
Rabshadaha qoyskaaga iyo kireysnida
Dib u helidda dammaanaddaada